Ogbugba egbugbere ọnụ: ihe 9 m chọrọ ka m mara tupu inweta ha - Ịma Mma
Ihe 9 m ga -achọ ka m mara tupu ị nweta agịga egbugbere ọnụ
Ele anya Insta ahụ adịghị ọnụ ala.
Mmadụ nwere ike ịsị na enwere m ihe gbasara onwe m, n'agbanyeghị na ọ bụghị n'ụzọ na -enye m ohere ịgagharị n'ụwa na -enwe ahụ iru ala karịa ihe okike nyere m. Kama, m nọ n'ọnọdụ mgbanwe mgbe niile. Dị ka onye na -agwọ ọrịa na -enweghị ike ị nweta ndụmọdụ nke ya, ana m ahụ ndị ọzọ - imi buru ibu, obere imi, ntutu dị mma, ntutu isi siri ike, akụkụ ahụ siri ike, ahụ lanky - na -edozi, na -enwekarị anyaụfụ, ụdị mma ha mara mma. Otú ọ dị, mgbe ọ na -abịakwute m, a naghị ahapụkarị nke ọma.
Ruo afọ ole na ole gara aga, nkwenye m maka ihe efu bụ naanị ihe dị elu-ọgwụgwọ keratin, n'ụlọ nhazi ihe , ngwa ọkụ, serum, mgbakwunye, Igwe ihu laxative Switzerland Kriss - Ọ dịtụbeghị mgbe m dara n'okpuru mma, nwalere ihe na -adịghị mma, ma ọ bụ mefu ego ọ bụla ziri ezi n'otu mgbanwe. Ọ bụghị n'ihi na m na -emegide (esi m na ezinụlọ mpako ndị na-akwado ịwa ahụ plastik .
Abịara m lekwasị anya n'egbugbere ọnụ m n'ihi na-n'eziokwu-enwere m hyperaware maka otu ụkpụrụ mara mma nke malitere ijupụta wee rute ọdịbendị a ma ama, ahụrụ m onwe m ka m na-abanye n'ime ya. ihu m bidoro yie ihe na -agagharị agagharị, na -enweghị mmekpa ahụ, siri ike eke. Nnukwu, ohiri isi, egbugbere ọnụ na-eyi adịgboroja nọ ebe niile, ọbụlagodi na ụmụ agbọghọ ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ afọ iri abụọ m tọrọ m, m wee banye.
N'afọ sochirinụ, enwetara m ọgwụ egbugbere ọnụ ugboro abụọ, site n'aka ndị dibịa asambodo abụọ dị iche iche. Na nke mbụ, enwere m nkụda mmụọ nke ukwuu-agara m na-eme mkpọtụ, omume mara mma nke ụfọdụ ndị enyi m na-edezi mara mma na-agakarị-ọ dịkwa m ka m were $ 900 wee tụba ya n'oké ifufe, Ụdị Samantha Jones . Dọkịta ahụ ajụghị m ihe ọ bụla, o yikwara ka ọ gbasaghị m, ahapụkwara m na -aghọ onye wayo na enweghị obi ụtọ. Enweghị ihe dị iche, a gwakwara m na m nwere ike ịkwụ ụgwọ karịa ma ọ bụrụ na m chọrọ ịhụ otu.
otú iji retinol ọbara
Ka ọ na -erule oge m gara leta dọkịta nọmba abụọ- Michele Green , M.D., onye dibia bekee sitere na New York na Onye nkwado RealSelf - Aghọtara m na agba nke mbụ nwere ike nwee ihe ịga nke ọma ma ọ bụrụ na m na -ekwupụta ihe m chọrọ. Agwara m Green ozugbo na achọrọ m ịhụ ọdịiche pụtara ìhè, ọ wepụtakwara oge na -amụ ihu m na ịjụ m ajụjụ.
Anyị kpebiri na sirinji Juvederm, nke bụ ihe m ga -enwe n'afọ gara aga, n'agbanyeghị na Green tinyere ya niile n'egbugbere ọnụ m, ebe dibịa gara aga jiri ụfọdụ n'ime akpụkpọ ahụ gbaa m ọnụ. More na nke dị n'okpuru, yana ụfọdụ amamihe dị mkpa m nwetara n'aka Green. Ọ bụrụ na ị na -eche maka ihe na -emeju egbugbere ọnụ, buru ụzọ gụọ nke a ka ị hapụ ihe ị bịara.
Ịkwesịrị ịkwadebe - n'echebara echiche na n'ụzọ anụ ahụ.
Na nke mbụ gburugburu, emeghị m. Nzọụkwụ mbụ, dị ka Green si kwuo, bụ ikpebi etu ị dị n'eziokwu chọrọ egbugbere ọnụ gị-chee echiche nke ọma ma ị ga-achọ n'ezie ị ga-esi na nke dị gịrịgịrị gaa Lisa Rinna n'otu ntabi anya. Ọ ga -abụ ihe doro anya. N'ezie, ị chọghị ka [egbugbere ọnụ gị] jujuo afọ, ọ dịkwa mfe ịnwe obere ihe karịa, Green kwuru. Mana ọ bụrụ na ịmara na ịchọrọ ịhụ ezigbo ọdịiche ozugbo, ọ bụ gị ka ị ga -ekwupụta nke ahụ - ọkachasị ebe m chọpụtara na ọtụtụ ndị dọkịta na -ahọrọ ọrụ ha ka ha yie ihe karịrị ike mmadụ.
N'anụ ahụ, Green na -atụ aro ka a ghara ị aspụ ọgwụ aspirin, Motrin, Aleve, mmanụ azụ, multivitamins, na vitamin E ihe dị ka otu izu tupu ịhọpụta gị, ebe onye ọ bụla nwere ike rụọ ọrụ dị ka ihe na -ebelata ọbara ma na -enye aka na nchikota nsị.
Hapụ foto Kylie n'ụlọ.
Ndị juri ọkachamara na -ekpebi ma ị ga -ewetara gị foto na nhọpụta gị. Agụọla m na ụfọdụ ndị dọkịta nwere mmasị na ya, mana ndị ọzọ anaghị amasị ya. Green nọ n'ogige nke ikpeazụ, jiri ya tụnyere iwebata foto n'ụlọ ebe a na -eme ntutu - ị nwere ike gosi onye na -eme stylist ihe ị chọrọ, mana ụdị ntutu gị nwere ike ọ gaghị emezu ya, yabụ ị ga -apụ na mmechuihu. Ọdịdị onye ọ bụla dị iche, na ihu onye ọ bụla nwere ọdịdị dị iche, o kwuru. Ọ kaara gị mma ịkọwa ihe ị chere na ịchọrọ yana ikwe ka dọkịta gị rụọ ọrụ na nhazi ọnụ gị iji nweta ya.
(N'agbanyeghị nke ahụ, mgbe m kwupụtara mmetụta Kylie nye Green, ọ kwadoro na ọ bụ ihe dị adị n'etiti ụmụ nwanyị nọ n'afọ ndụ niile. Onye ọ bụla na -abịa na -arịọ maka egbugbere ọnụ ya, ọ gwara m. Ha niile na -asị, 'Achọrọ m egbugbere ọnụ dị ka Kylie.' Mee nke ahụ ihe ị ga -eme.)
Tupu Juvederm; izu ole na ole mgbe
Ihe nzacha ọ bụla nwere ike nweta ihe dị iche iche.
Oge agaala mgbe ụmụ nwanyị nwere naanị collagen dị ka nhọrọ. N'ọnọdụ ya, ụdị njupụta dị iche iche apụtala nke dabere na ya hyaluronic acid , ihe nke na -apụtakarị n'arụ anyị na -amasị mmiri nke ukwuu wee jikọta na mmiri. N'ekwughị maka ya, ihe ahụ na -eguzogide nke ọma na akpụ akpụ na ntụpọ - ọ dị m ka ọ dabara ozugbo, mana ha na -emezi ngwa ngwa.
Ịhọrọ ụdị ka dịrị dọkịta mma dabere na mkpa gị, mana smorgasbord buru ibu. Dịka ọmụmaatụ, Green na -ekwu na ọ bụ Juvederm na -enweta ntorobịa, ohiri isi, na -enwu enwu, ebe ọ na -eji Restylane maka enwetara m egbugbere ọnụ m ntakịrị mana ọ nweghị onye ga -amata ịma mma, n'ihi obere irighiri ya. Maka ndị ahịa meworo okenye, m na -eme Volbella mgbe niile, nke dị mma ịjupụta ahịrị gburugburu ihu, o kwuru.
Anya Insta adịghị ọnụ ala.
Anyị niile juputara na foto ụmụ nwanyị nwere nnukwu egbugbere ọnụ n'ezie, mana amaghị m ego ọ ga -ewe iji nweta ụdị ahụ. Otu sirinji nke Juvederm anyị jiri (1 cc) na teknụzụ erughị otu ngaji ihe, mana ekesara ya n'ụzọ mere ka nsonaazụ m pụta ìhè karịa ka ọ dị na mbụ - mana ọ bụghị ihe dị egwu.
mmanụ kacha mma maka akpụkpọ agwakọta
Mgbe m jụrụ Green ego ole ụmụ agbọghọ m hụrụ na social media na -enweta, ọ sịrị, n'egbughị oge, ọnụ ahịa sirinji abụọ ma ọ bụ atọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị karịa. Ịtụle elekere ọ bụla na $ 400 ruo $ 1,000, dabere na ọnọdụ yana omume -nke ọma, bido ịchekwa ugbu a.
Filler abụghị mgbe niile.
Ọ dị m ka ya bụrụ, ikwu eziokwu. Ọ dabere na usoro ị họọrọ, mana dị ka Green, ọtụtụ ọnwa isii gara aga ruo otu afọ. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị hụrụ nsonaazụ mbụ gị n'anya, were ọtụtụ eserese n'ihi na ọ na -apụ n'anya. Ma ọ nweghị ihe ị ga - eme iji mee ka ihe nzacha dị ogologo, ebe ọ bụ na onye ọ bụla na - agbari nri n'ụzọ dị iche.
Tupu nzacha; ihe fọrọ nke nta ka ọnwa ise gachara
Nlekọta anya pere mpe.
Ịla ezumike nká, ndụ gị nwere ike ịmaliteghachi-n'agbanyeghị ụfọdụ akụkọ na-atụ egwu ị nwere ike ịhụ n'ịntanetị. Dị ka Green si kwuo, naanị ihe ị ga -ezere bụ ọgwụ aspirin. Ị nwedịrị ike iji iko ma ọ bụ mmanya abụọ megharịa anya ọhụrụ gị. Ụfọdụ ndị mmadụ na -asị na ị gaghị a alcoholụ mmanya tupu dịanyā n'ihi na ị nwere ike merụọ ahụ, mana ahụbeghị m nnukwu ọdịiche mgbe ọ gachara, ọ sịrị. Banyere ice, dọkịta ga -etinye ngwugwu oyi n'ọnụ gị mgbe etinyere ihe nzacha gị ma gbaa gị ume ka ị na -eji ihe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ọ na -ewute gị, mana ọ dịghị mkpa ịnọnyere ya ruo ọtụtụ awa na njedebe. Ezigbo ọzịza na -agbada n'otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ.
Ihe ọzọ ma ndị dọkịta m hụrụ tụrụ aro ka ọ bụrụ ihe ezi uche dị na ya: a notụghị ahịhịa site na ahịhịa ozugbo ịgba ntụtụ gị, na ịghara ị drinkụ ihe ọ hotụ hotụ na -ekpo ọkụ — ị ka ga -enwe nkụda mmụọ ma nwee ike gbaa onwe gị ọkụ. Ahu.
Usoro ọgwụgwọ nke nta nke nta bụ nhọrọ.
Agbanyeghị na m gwara Green ihe m chọrọ, ọ ka siri ọnwụ ịchekwa ntakịrị Juvederm na sirinji m ka m gbakwunye ma ọ bụrụ na m chọrọ. Bie ndụ n'ihe m nyere gị n'izu abụọ, ọ gwara m. N'ezie, agbagoro m azụ maka ihe fọdụụrụ m, mana ọ bụrụ na ụjọ na -atụ gị ma ọ bụ na ejighị n'aka, jụọ dọkịta gị ma ị nwere ike iji ihe ị kwụrụ ji nwayọọ nwayọọ.
Ịgba aghara na -adabere na onye ahụ.
Maka m, enwere mgbu nhụjuanya na -eme n'ụzọ nkịtị - ọkachasị gburugburu egbugbere ọnụ m, nke na -adị nro - mana ọ bụrụ n'ịgbaso ndụmọdụ dọkịta gị (jiri ice, enweghị Motrin, belata ị alcoholụ mmanya na -aba n'anya, emetụla aka, ma gbalịa ịnọ kwụ ọtọ ma ọ bụ dina ala ruo awa ole na ole ka emechara usoro ahụ), ị kwesịrị ịdị mma. Nke ahụ kwuru, ahụ onye ọ bụla dị iche, yabụ na ọ siri ike ịkọ ma ọnya ọ bụla ga -apụta mgbe ịgba egbugbere ọnụ gị.
Ma ọ bụrụ n'ezie na enweghị afọ ojuju na nsonaazụ ya?
Laghachi ma mee ka ọ gbasaa, Green kwuru. Ihe nzacha niile ndị mmadụ na-eji ugbu a-Restylane, Belotero, Volbella, Voluma, Juvederm-ha niile dabere na hyaluronic-acid, yabụ na ha niile nwere ike jiri hyaluronidase, enzyme na-agbaze hyaluronic acid ngwa ngwa na enweghị nsogbu.
Ọnwa isii ka m hụchara Green, egbugbere ọnụ m ka na -adị ka egbu egbu. Achọpụtara m ntakịrị mbelata nke ụda olu - enwere ike ikwu nke ọma na oge. Ị nwere ike ịhụ ya na foto dị n'elu, yabụ enwere m ike ị nweta okirikiri ọzọ n'oge adịghị anya. Agaghị m emejọ ma ọ bụrụ na ị chọpụta. N'ezie, enwere m olileanya na ị ga -eme ya.
Perrie Samotin bụ onye ntụzi dijitalụ na Ọmarịcha. Soro ya na Instagram @perriesamotin .
Ala Na Fatịlaịza
ụdị egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ ụdị
kedu ka m si eto ntutu m
ego ole iwepu ntutu laser
obere uwe inyom t Chiefs
eke ntutu isi na -agbagọ ma na -agbagọ